Ciidamada Kumaandooska Somaliya oo Al-Shabaab kala wareegay deegaanno cusub | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Ciidamada Kumaandooska Somaliya oo Al-Shabaab kala wareegay deegaanno cusub
Ciidamada Kumaandooska Somaliya oo Al-Shabaab kala wareegay deegaanno cusub
Sh/Hoose (Halqaran.com) – Ciidamada kumaandoos-ka ee DANAB iyo Gor-gor oo siwada jir ah u howlgalaya ayaa waxaa la sheegay in maleeshiyaadka Al-Shabaab kala wareegeen deegaannada Jilib, Marko iyo Gendershe oo hoosyimaado degmada Marko ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose.
Howlgalka ayaa saraakiisha hoggaamineysay waxaa ay sheegeen in uu ahaa mid qorsheysan oo ujeedkiisu ahaa in Al-Shabaab laga saaro dhulka xeebta ee u dhexeeyo deegaanka Jasiira iyo degmada Marko.
Taliyaha guutada 16-aad kumaandooska xoogga dalka DANAB G/le Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa Idaacadda Ciidamadda Qalabka Sida u sheegay in Ciidanka intii ay howlgalka xorreynta ah kuguda jireen ay ku dileen laba Sarkaal oo u qaabilsanaa Al-Shabaab deegaannada Xeebta ah oo ay Ciidamadda la wareegeen.
Taliyaha ayaa sheegay in saraakiisha la dilay inay lagu kala magacaabi jiray Xeroow, iyo Ciise Yare, isla markaana ay weli ku raadjoogaan saraakiil kale.
Sidoo kalena Ciidamadda kumaandooska xoogga dalka ee Danab iyo Gor-gor ayaa iminka waxay wadaan howlgalo baaritaano ah oo ay ku xaqijinayaan ammaanka deegaannada Jilib, Marko iyo Gendershe ee gobolka Shabeelaha hoose.